Col. Xasan Abshir oo heshiis qarandumisa la galay Shirkada Top Cat Marine Securuty oo ka diwaan gashan dalka Mareykanka
Buluugleey, November 27, 2005
Col. Xasan Abshir oo ka wakiila Col. C/laahi Yusuf iyo danaha beelaha Gobolka Bari ayaa heshiis la saxiixday Mr. Casini oo horjooge u ah calooshooda u shaqeystayaal laga diwaan gelinayo shirkaad Top Cat oo uu ku dhacay magac xumo iyo burbur dhaqaale.
Shirkadaas ayaa waxey caan ku ahayd dhismaha doonyaha dheereeya, waxeysa hadda ku dartay howlaheeda in si qaab calooshooda-u-shaqeystanimo leh ay uga howlgasho wadamada dibeda, waxeyna qorataa shaqaalaha ka rajada beelay adduunka oo horay u soo ahaa jirey ciidan milateri.
Shirkadaas waxaa lagula heshiiyey 55 milyan oo Doolar labada sanno oo ugu horeysa, garabka Jowharna ma hayo lacagtaas. Waxaa lacagtaas laga soo saarayaa maraakiibta sida sharci darada ah uga kaluumeysta xeebaha Soomaalida.
Xasan Abshir ujeedada uu heshiiska ula galay calooshooda u shaqeystayaal shisheeye waa ay ka weyn tahay in shirkadaas ay la dagaalanto doonyaha hubeysan ee ka soo horjeeda shirkadaha shisheeye ee ka kaluumeysanaya xeebaha Soomaalida.
Marka kowaad, dagaaloogayaal uu ka mid yahay Xasan Abshir ayaa si gaara qandraasyo ula galay shirkado shisheeye oo si sharci darro ah uga kaluumeesta xeebaha Soomaalida. Doonyaha hubeysan ee ka soo horjeeda Tuugnimada baddaha Soomaalida ay ku hayaan shaqsiyaad Soomaaliyeed iyo shirkado shisheeye ayaa waxey halis ku noqotay danahiisa gaarka ah.
Marka labaad, qarashka shirkadaas lala galay ayaa waxaa laga rajeynayaa in deeq lacaga looga helo dowladda Mareykanka oo cabsi weyn ka qabta in ra’yiga dadkeedu uu ka keeno arrintaas dareen culus. Qarashka intiisa badan ayaa la filayaa iney ku baxdo iibsiga doonyaha dheereeya oo marka dambe ku soo wareegi kara gacanta kuwa gacan saarka la leh heshiiska qandaraaskaas, waxaa sidoo kale aan meesha ka marneyn dalaalnimo laga helo qeyb ka mida lacagtaas.
Marka sadexaad, maleeshiyooyinka la saarayo doonyahaas waa kuwo ka soo jeeda beelaha Bari iyo kuwa guud ahaan la heybta wadaaga, taasna ay tilmaameyso ujeedada dagaalka bada oo ah in lagu cadaadiyo degaano gaara ama lagu tirtiro doonyaha ay isku difaacayaan xeebaha dhexe.
Waxey u muuqataa in dagaalkii beelaha hadda loo leexiyey dhinaca bada iyadoo la kaashanayo calooshooda u shaqeystayaal shisheeye oo danahoodu ku saleysan yihiin qaab burcadnimo. Top Cat ayaa asal ahaan waxaa is ka leh dad ka soo jeeda Talyaaniga oo u dhasay dalka Mareykanka, waxaana loo badinayaa iney ku lug leeyihiin kooxda maafiyada Talyaaniga. Dadka Soomaaliyeed waxey wixii eeda oo ka yimaada shirkadaas Mareykanka ay dusha u saari doonaan dalka Mareykanka oo qaan ahaan loo raacanayo waxyeelada ay geysato shirkadaas.
Col. Xasan Abshir ma ahan markii ugu horeysey ee uu dalka soo geliyo calooshooda u shaqeystayaal shisheeye. Hadda ka hor ayaa lagu tuhmayey in isaga iyo Jurille ay ku lug lahayeen qandaraasyadii calooshooda u shaqeystayaalka South Afrika lagula soo heshiiyey inay ku burburiyaan gobolada waqooyi wakhtigii ay sii liiceysay dowladii keligitaliyihii milateriga ahaa ee Siyad Barre. Sidoo kale wuxuu gobolka Bari horay u keenay shirkad ka dhalisay degaanka iska hor imaad iyo khilaaf weyn, taas oo lagula heshiiyey ilaalinta xeebaha Bari. Dalaalnimada laga helo qandaraasyada lala galo shirkadaha shisheeye ayaa ah dulucda ugu weyn ee laga leeyahay magacyada shirkadaha la huwinayo iskaashiga magac u yaalkaa.
Adduunka kama jirto dowlad ay calooshooda u shaqeystayaal u yihiin ciidankooda badda. Col. Xasan Abshir wejigiisa qaawan waa inuu si burcadnimo ah hantida Soomaalida ee badda ku jirta uu magac shisheeye la kaashado sidii uu u dhici lahaa, kuna laayo danahiisaas qaldan dhaliyarada aysan isku heybta ahayn ee ka soo horjeeda damaacigiisa.